Umkhuzi Wamaphoyisa angaphansi kweMzimkhulu Cluster uxoxa ngokusinda kwakhu kumdlavuza wesibeletho – eHowzit
Umkhuzi Wamaphoyisa angaphansi kweMzimkhulu Cluster uxoxa ngokusinda kwakhu kumdlavuza wesibeletho
Umhkuzi wamaphoyisa ngaphansi Mzimkhulu (Cluster) Major General Thembi Ndlovu-Miya oneminyaka engama-44 uthi, nakuba ziningi izinselelo ake abhekane nazo kudwa akasoze akukhohla ubuhlungu adlula kubo ngesikhathi ehlengelwa isifo somdlavuza wesibeletho civic cancer
UNdlovu ubhoboke okokuqala ngokuphunyula kwakhe kulesi sifo esithathwa njengesingumnqamla juqu kwabezindaba, njengalokhu ethi kwakukhuluma ngaso wayeqala ngenkathi ethula inkulumo emcimbini owawuhlelwe ngumasipala wase Hibiscus Coast endaweni yakwaMadlala wokuvala imigubho yenyanga yabantu besifazane mhla zingama-29 ku August.
Elandisa abezindaba ze eHowzit kwinkuulumo ngxoxo ebihleliwe uthe nakuba ubungakuxwayi ukuyohlola lesisifo , kodwa ngonyaka wama-2013 ngenyanga ka June wezwa ubuhlungu nabe esethi makaphuthume ayohlola nalapho eqhuba ethi udokotela wamutshela ukuthi kukhona okungahambi kahle wabe esemuthumela lapho ayezoxilongisiswa khona.
“Ngahamba ngaya ku Dokotela wase Margate nowathi kimina kukhona okugahambi kahle, wabe esengitshela ukuthi kukhona okungahambi kahle kuzofanele ngiphinde ngihlolwe futhi, nangempela ngenza njalo wabe eseqinisekisa ukuthi isimo sami sibi kakhulu futhi sesiyaphuthuma ngoba ngokwezigaba umdlavuza wami wausufike esigabeni esimbi kakhulu stage 2” kusho u Ndlovu.
“Kwaba nzima kakhulu njengalokhu ngangingakwazi nokutshela amadodakazi ami amabili aneminyaka ephakathi kwa-27 kanye no 20 ngoba ngisabela ukuthi azothuka kakhulu, kodwa uxhaso oluningi ngangiluthola kozakwethi kakhulu nabo ababe sebeke badlula kulesi simo, ungibona nje ngesikhathi sengithola usizo lwezempilo ngagcina sengingenalo ngisho unwele olulodwa, lezi ezikhona nje zintsha” kubeka uNdlovu.
Lo-Ka Ndlovu nose sebenze embuthweni wamaphoyisa cishe iminyaka engama-22, nosephathe kakhulukazi iziteshi kakhulukazi ezaziwa njengezisezindaweni ezishisayo okungabalwa kuzo Mashu Police Station, Point Police Station, Khayelitsha kanye nakwa Nongoma uthi , umdlavuza awuwadingi amagwala kodwa udinga abantu abanemiqondo emile abakwaziyo ukubhekana nanoma iziphi izimo.
Ube esekhuthaza abantu besifazane ukuba bajwayele ukuhlola lezi zifo kuze bahlale bephephele.